१२ करोडमा सलमान खानलाई नेपाल ल्याउन भन्दा १२ करोड धुर्मुस सुन्तलिलाई दिएको भए अरू दुई ओटा नमुना बस्ती बन्ने थिए। - Enepali Online
Written by:Enepali OnlinePosted on: February 11, 2018
बलिउड चर्चित अभिनेता सलमान खान होलीको अर्को साता नेपाल आउँदै छन् । सन् १९९४ मा पहिलो पल्ट नेपाल आएका सलमान दुई दशकको अन्तरालपछि आउन लागेका हुन् ।
सलमानको सांगीतिक कार्यक्रम फागुन २६ मा टुँडिखेलमा हुनेछ । आयोजक ओडिसीले कार्यक्रममा सलमानका ५० हजार प्रशंसक जम्मा हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ओडिसी इन्टरटेनमेन्टका निर्देशक सीमान्त गुरुङले नेपाल लाइभसँग भने, ‘सलमानको शो नेपाली इन्टरटेनमेन्ट इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो हुनेछ । कार्यक्रमका लागि हामीले १२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं।’
‘दबंग द टुर’ नाम दिइएको यो कार्यक्रमका लागि सलमान फागुन २५ मा नेपाल आउँदै छन् । उनीसँगै बलिउड नायिका सोनाक्षी सिन्हा, डान्स मास्टर तथा फिल्म निर्देशक प्रभु देवा, डेजी शाह, कृति सेनोन र पञ्जावी भांगडा डान्सर ‘मिड बोस’ पनि हुनेछन् । सलमानसहितको समूहले करिब ३ घन्टा टुँडिखेलमा आफ्नो प्रस्तुति दिनेछन् ।
१२ करोडमा सलमान खानलाई नेपाल ल्याउन भन्दा १२ करोड धुर्मुस सुन्तलिलाई दिएको भए अरू दुई ओटा नमुना बस्ती बन्ने थिए। हजारौं बालबालिकाले पढने अबसर पाउँथे। सयौं हातले ति दाताहरुलाई रातदिन आशिर्वाद सधैं सम्मान गर्थे। गरिबका जिबन फेरीने थियो तर अपसोच धेरैलाइ चै महंगो टिकटमा सलमान लाई हेर्ने परेको छ। भगवान आउन लागेको होर यतिमरिहत्ते ????
हाम्रो देशका युवाहरु ले विदेशी कलाकार लिएर १२कराेड तिर्नुपर्ने यो कस्तो अचम्मको कुरा हो अलिकति पनि ध्यान दिउँ त। हाम्रा दाजुभाई दिदीबैनी खान नपाएर छटपटिरहेका छ। रहन लागि घर छैन, खान को लागि रासन छैन विदेशीहरुलाई आफ्नो देशमा भित्रै उनको लागि १२ करोड तिर्नुपर्ने कहानिर लेखेको छ भन्नुहोस। बिदेशी actor आफ्नो देशमा भित्र्याउँदा पर्यटकहरु भित्रिन्छन्?? नेपाली जनताहरुलाई gumraha बनाएर jati नेपालमा आयस्रोत छ विदेशी भित्र्याउने koshi गरिरहेका छन। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनी हरु लाई भन्न चाहन्छाै ।
यस सड्यन्त्र रची खेलमा नबस्नुहोला एक न एक दिन देशलाई कंगाल बनाएर छोड्छन। के हाम्रो देशमा याक्टरहरु छैन किन विदेशी actor भित्राउनु पर्यो। के हामी नेपालीको पनि विदेशीको जस्तो हैसियत छैन। उनीभन्दा स्वाभिमान भएका मान्छे हो हामि तर हाम्रो actors विदेश जाँदा कसैले पैसा दिदैन कुरा बुझ्न जरुरी छ ……!!
Previous Post Previous post: यस वर्षकै पहिलो सूर्यग्रहण फागुन ४ गते: यी ७ राशिको चम्किनेछ भाग्य, ५ राशिलाई नोक्सान!
Next Post Next post: मुकुण्देलाई मारे १० लाख दिन्छु ! भन्ने को हुन यी व्यत्ति ?
मेयर चौधरीलाई आक्रमण गर्नुको कारण प्रहरीले खुलायो, यस्तो रहेछ कारण
कलेजले यातना दिदै ३५ हजार पैसा मागेपछि भारतमा नेपाली विद्धार्थीले गरे आत्महत्या